दीपक सापकोटा - कान्तिपुर समाचार
दीपक सापकोटाका लेखहरु :
जिन्दगी एक चुनाव
मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा छ, जसको मत परीक्षण वैशाखान्तमा हुनेछ । त्यसपछि लगत्तै देश प्रदेश र संघको निर्वाचनमा होमिनेछ । चुनावले तरंगित हुन लागेको वर्षको पूर्वार्द्धमा हामीले चुनावको इतिहास, दर्शन र अर्थशास्त्रबारे विश्लेषणयुक्त सामग्री तयार पारेका छौं, जसमा राजनीतिशास्त्रीदेखि अर्थशास्त्रीसम्म र शिक्षाविद्‍देखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्मको विवेचना समाविष्ट छ ।
गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीतले सशस्त्र द्वन्द्व, फेरिएको व्यवस्था र नफेरिएको अवस्थाबारे व्यापक बहस सिर्जना गराएको छ । गीतले ‘जनयुद्ध’ का लडाकुको अपमान गरेको भन्दै माओवादी नेता–कार्यकर्ताले आक्रोश पोखेका छन् । चार भ्रातृ संगठनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर युट्युबबाटै भिडियो हटाउन र सार्वजनिक माफी माग्न सर्जकसँग माग गरेका छन् । उता सर्जक सपुतले भने वास्तविक पात्रहरूको जीवन कथा बुनेर गीत र भिडियो बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
त्रिवेणीघाट मान्छेको जिन्दगीजस्तै छ– कहिले सरस, कहिले नीरस, कहिले उज्यालो, कहिले अँध्यारो, कहिले भाव, कहिले अभाव, कहिले गुलजार, कहिले सुनसान ! यो घाटका आफ्नै खुसी छन्, आफ्नै दुःख छन् ।
शरद बनेपाको खोजी
बनेपास्थित पुस्तैनी घरको छिँडीमा मोहन दुवाल (७२) म्हः पूजा गरिरहेका थिए । कोठाको बत्ती मधुरो थियो र परिवारका सबै लहरै पलेंटी कसेर मण्डल सामुन्ने बसेका थिए । कोठामा प्रत्येक सदस्यका लागि फरकफरक मण्डलहरू फल, धूप र फूलले सजाइएका थिए ।
माछाहरूले आफ्नो कथा भन्नुपरे कसरी भन्लान् ? माछाका दृष्टिबाट मनुष्यका कर्तुत देखाउन मण्डला थिएटरमा मञ्चित नाटक ‘जिजीविषा’ ले भन्छ– मान्छेको मगजमा माछाको अनुभूति निसास्सिँदो छ ।
‘सतीप्रथाको अवशेष अझै जब्बर बनेर बसिरहेकै छ’
नारीलाई जिउँदै चितामा धकेल्ने इतिहासकै एउटा क्रूर संस्कार हो, सतीप्रथा । जन्मँदै पितृसत्ताको जन्जिरले बाँधिएका नारीहरू आफ्नो स्वाभाविक आयु बाँच्नसमेत स्वतन्त्र रहेनन् । महिलाको जीवनलाई पुरुषको नियन्त्रणमा राख्न थालनी गरिएको यो प्रथालाई पछि शासकहरूले सत्ता टिकाउने हतियारसमेत बनाए । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले सय वर्षअघि कानुनी रूपमै बन्देज नलगाएसम्म नेपालमा पनि यो शृंखला लामै चलिरह्यो ।
मानिसको पहिलो र प्रमुख आश्रय नै प्रकृति हो । बाँच्नका खातिर हामीले जे–जति भोग–उपभोग गर्दै आएका छौं, ती सबै प्रकृतिकै देन हुन्— भोजनदेखि खनिजसम्म, उर्जादेखि इन्धनसम्म !
‘अरनिकोले बनेपाको लायकुमा बनाएको नौतले दरबारकै नमुनामा चीनमा पनि एउटा दरबार बनाएका थिए ।’ किंवदन्ती बनेको बनेपाको लायकु, दन्त्यकथाजस्तै बनेका अरनिको ! अनि तिनै अरनिकोले लायकुको नमुनामा चीनमा पनि दरबार बनाएको मिथक–कथा !